Ukunethezeka okusondelene enhliziyweni ye-Tweed Caldera
Tyalgum Creek, New South Wales, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Louise
I-Sky Cottage iyinhlanganisela ephelele yobuhle, ukunethezeka, nokubuka okumangalisayo. Yamukelwe eMount Warning (Wollumbin) Caldera, leli kotishi elihle elakhiwe ngesandla liyindawo nje yokuphonswa kwetshe ukusuka edolobhaneni elinempilo laseTyalgum, kanye nohambo lwemizuzu engama-20 ukuya edolobheni elimatasa laseMurwillumbah.
Esanda kwakhiwa, i-Sky Cottage iyivelakancane, njengoba iziqhayisa ngezinto ezintsha zesimanje ezinokunethezeka kwezwe kanye nobuhle besikhathi eside. Jabulela ukubukwa kwentaba okunwetshiwe, i-Wi-Fi engenamkhawulo, kanye nebanga le-adventure noma izinketho zokuphumula.
I-Sky Cottage inikeza:
* Ukufinyelela kwangasese ngokupaka izimoto ezimbili
* Ukufinyelela kwekhiphedi kukhiye wekotishi
*Amakamelo amabili okulala anemibhede yendlovukazi ebolile
* Goqa uvulandi onezicabha zaseFrance eziya emakamelweni okulala nasendaweni yokuphumula
* Ikhishi lesimanje elinemishini emisha, kufaka phakathi umshini wokuwasha izitsha nesitofu segesi
* I-Weber BBQ yokupheka ngaphandle
* Igumbi lokugezela elihlanzekile elinamarack ethawula ashisayo
* Umshini wokuwasha omusha
* Isipikha se-Bluetooth esine-iPod mini elayishwe umculo
* I-Wi-Fi engenamkhawulo yamahhala
* Umabonakude we-Smart 4K olayishwe i-Netflix, i-Stan, i-YouTube, i-ABC iView, i-SBS On Demand, nokuningi. * Sicela uqaphele ukuthi ASINAZO iziteshi eziya emoyeni mahhala. 7,9,10.
Futhi, siyakuthakasela ukuphila okunempilo nokusimeme, ngakho i-Sky Cottage iyaziqhenya ngalokhu:
* Izindonga zangaphakathi ezipendwe ngaphandle kopende be-VOC Rockcote
* Insimbi engagqwali ehlungiwe amathangi
* Isitoreji selanga esisezingeni eliphezulu esinesipele segridi
* Impahla eyenziwe ngesandla kanye ne-upcycled
* Imikhiqizo yokuhlanza engenabuthi (Yonke ilineni iyawashwa ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali)
(Sinokwamukela i-Telstra okuphelele kodwa i-Optus ishaywe futhi iyaphuthelwa endaweni yethu futhi yamukelwa kangcono e-Tyalgum Village.)
- Sicela uqaphele, i-Sky Cottage inemikhawulo eqinile yokuhlala, kuze kufike kuzivakashi ezimbili kuphela. Lokhu akuxoxiswana ngakho.
4.99(163 okushiwo abanye)
4.99 out of 5 stars from 163 reviews
4.99 · 163 okushiwo abanye
Sithanda ukuhlala eTyalgum! Ihlinzeka ngokuphila kwezwe ngokuthula, nakuba iphinde ikhiphe ukunyakazisa okuheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba.
Idolobhana lamagugu e-Tyalgum linikeza ukudla okuhle kanye nengxube yempahla ehlukahlukene, kusukela endaweni yokudlela ewine umklomelo ye-Flutterbies kuya ezitolo ze-Marketta Lane. Isitolo seTyalgum Gelato sidume ngegelato yaso yesiNtaliyane (ama-flavour ashintsha isonto ngalinye!), kanti Isitolo Esijwayelekile esineminyaka engu-100 sixuba ubuhle bezwe nobukhazikhazi besimanje.
Kwabasebenza kakhulu, kunemizila yemvelo emangalisayo nezimangaliso zemvelo ongazihlola. I-Tyalgum Hall iphinde inikeze i-yoga kubo bonke ngoLwesine nangeMigqibelo.
Izinto eziseduze zifaka:
* Tweed Gallery, Margaret Olley Art Centre (18mins)
* Ukuhamba Kwesexwayiso Sokuntaba (imizuzu engu-20). Kuvaliwe kuze kube esinye isaziso.
* Ibhuloho Lemvelo (25mins)
* I-Husk Distillery Tumbulgum (imizuzu engama-30)
* I-Clarrie Hall Dam kanye ne-Uki Village (20mins)
* I-Murwillumbah Regent Cinema (20mins)
* Amabhishi e-Surf (Cabarita/Kingscliff/Brunswick Heads 45 min)
* I-Byron Bay (imizuzu engu-50)
Sihlonipha ubumfihlo bakho! Mina nomyeni wami sihlala endaweni engamahektha ayi-10, nakuba indawo yethu yokuhlala endlini enkulu ibheke ngaphesheya kwe-Sky Cottage. Sifinyeleleka kalula ngocingo noma mathupha, nakuba siye sanakekela ukufika kwakho kwangasese nokuhamba ngesistimu yokufaka ikhiphedi.
Ngisebenze endaweni yokwamukela izihambi ezisezingeni eliphezulu, futhi ngijabulela ukunaka imininingwane emihle yenhlanzeko ecwebezelayo, ukunethezeka, nokunethezeka. Ngethemba ukuthi nibe nesikhathi esihle sokuhlala nathi e-Sky Cottage.
Sihlonipha ubumfihlo bakho! Mina nomyeni wami sihlala endaweni engamahektha ayi-10, nakuba indawo yethu yokuhlala endlini enkulu ibheke ngaphesheya kwe-Sky Cottage. Sifinyeleleka k…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-1557-2
Hlola ezinye izinketho ezise- Tyalgum Creek namaphethelo